Corrosion lihunyushwa lisuselwa Latin ngokuthi "insimbi". Ngakho yinqubo ukubhujiswa noma iyiphi impahla (ukhuni, ngobumba, polymer, metal) ngenxa yokuchayeka imvelo, kungakhathaliseki inhlabathi, umoya, amanzi (ulwandle, umfula, ixhaphozi, ichibi, nangaphansi komhlaba) noma iyiphi enye imidiya. Ngokuphathelene izinsimbi eside ukugqwala izinsimbi ingena esikhundleni a eside generalized "nokugqwala". Ngokwesibonelo, lapho umoya-mpilo yensimbi ukugqwala amafomu amanzi hydroxide ferric hydrated - nokugqwala abavamile.
Corrosion ngezinto kuholela ukulahlekelwa ezinkulu - Russia kuyinto ukulahlekelwa yonyaka ezigidi amathani amatshe ayigugu. Bangaphezulu kuka-10% we ukukhiqiza yonyaka metal amashubhu babe yaphela indaba yalo ngenxa ukugqwala. Ngenxa yalesi sizathu, wangcwatshwa ezakhiwe phansi metal izakhiwo ahlukahlukene, isitoreji amathangi uwoyela nezinye amaminerali azizifanelekeli 3-4 iminyaka, uma kungukuthi bavikelekile obangelwe ukugqwala inhlabathi-umhlabathi. Adle amakhebuli kagesi nokuxhumana, phansi ukubhukuda izindawo, imoto umzimba kanye nezinye izimoto.
Inhlabathi nokungcola ukugqwala izinsimbi - inqubo electrochemical ukuthi kuncike ezintweni ezifana ukwakheka kwamakhemikhali zenhlabathi, umswakama wawo futhi emoyeni permeability, uhlobo metal, ukufana yayo, ubunjalo ebusweni sufaka.
Ukuze ugcine metal emhlabeni (amanzi, umoya, nenye imidiya), udinga ukwazi izizathu, okungase kubangelwe ukugqwala metal. Ukuze uthole idatha ngezinga of ukugqwala umsebenzi inhlabathi oludingekayo sokuthuthukiswa zinyathelo ukuvikela metal izakhiwo kusuka ukugqwala lucwaningo oluphelele ensimini futhi laboratory izifundo nenhlabathi.
Ukuvikelwa izinsimbi kusuka ukugqwala kusekelwe yalezi zindlela:
1. kuphakame izinto constructional chemical ukumelana (ukugqwala ukumelana Alloys yethula amaseli noma, Ngakolunye uhlangothi, ukususwa amanyela kusukela ingxubevange ukugqwala kuyashesha);
2. ukuzihlalela ebusweni metal ekuhlaselweni by abezindaba nolaka (upende varnishes lokunameka metal, nangokuvikela amafilimu, Electroplating) ;
3. Ukuvikelwa electrochemical - bedle i zamanje zangaphandle esikhulu isakhiwo insimbi;
4. ukwehla nolaka medium nge isingeniso ka ukugqwala inhibitor (arsenates, chromates, nitrites), deoxygenation noma neutralization ophansi.
Lezi zindlela zihlukaniswe amaqembu 2. Izindlela ezimbili zokuqala lwenziwa ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo metal at the stage of design noma ukukhiqiza, umehluko ukusebenza ngeke. Ezinye izindlela ezimbili zikhishwa kuphela ukusebenza metal futhi ungakwazi ukushintsha imodi Ukuvikelwa kuncike ushintsho imvelo langempela.
Lo mbuzo, njengoba Ukuvikelwa ukugqwala metal, futhi okwamanje efanele, sidinga indlela olunzulu ukuze sifune yesimanje izixazululo, ekuthuthukiseni izindlela ezindala esimnkantsh futhi izinto zokuzivikela.
Amanzi heater nge fan: Kuyini lokhu?
Abantu edume kakhulu emlandweni Russia
Kuthiwani uma emibi amazinyo?